Article submitted by: minkyaw thuyein on 13-Aug-2013
ဒို.တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူကို ကွဲအောင် တမင်လှုံ.ဆော်နေသူတွေရှိတယ်။တ ပ်မတော်ကိုပြည်သူအများထင်မှားအောင်တပ်မတော် (ကြည်း ရေ လေ ရဲတပ်ဖွဲ.) အတွင်းက တပ်မတော် စည်းကမ်း လိုက်နာခြင်းမရှိဖေါက်ဖျက်
သူတွေ ၊ ကျူးလွန်သူတွေ ကို နိုင်ငံတော် နဲ့ နို်င်ငံသား တို.အကျိုးဌာ၊ နိုင်ငံတော် လုံခြုံးရေး ရှေ.ရှု ရျွ် ပြင်းထန်သော အရေးမှု ပြစ်ဒါဏ်များပေးခြင်း
ဖြင့်တပ်မတော်ကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ် ပြုပြင်ရမယ် ဖြစ်တယ် လို. ယုံကြည်တယ်။
တပ်မတော်ထဲ ၀င်လာလို အများဆုံး အနံဆုံး ရက်သတ္တ ၃ ပါတ်က အများဆုံး ၃ လမျှ လေ့ကျင် သင်ကြားပေးမိရင် ဒီတပ်မတော်သားဟာ အမိန်ယနာခံခြင်း ၊ စည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်ခြင်းရှိ၊ တပ်မတော် အပါအ၀င် နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်သားတိုအပေါ်သစ္စာစောင့်သိနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ ဆိုတာကို လေ.လာတွေရှိရလိမ်မယ် အဲဒီအချိန်ကစပြီး တပ်မတော်ကိုဇကာစစ်သွားမယ်
ဆိုရင်၊ တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူတပ်မတော် အမှန်ဖြစ်လိမ့်မယ် ။
တပ်မတော်နဲ့ပြည်သူကိုဘယ်သူမှ ခွဲလို.မရဘူးဖြစ်လိမ့်မယ် လို. ဦးစွာပြောခြင်
တယ်၊ ဒီနေ.ဒို.နိုငံမှာ လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူ အမျိုးမျိုးရှိနေသမျှ ။ ဒီ သောင်းကျန်းသူ တွေကိုနှိမ်နင်းဘို.တပ်သား စုဆောင်ရာမှာ အရည်အချင်း
ထက် အရည်အတွက်က များနေလိုးလိုကောင်း များနေလိမ့်မယ်။ ဇကာစစ် ဘို.အချိန် မသိပ်မရှိဘူး ၊ ထောင်မကျဘူးလို့ ရာဇ၀တ်ပစ်မှု မှတ်တမ်းမ၀င်တဲ့ ခါးပိုက်နှိုက် ၊ သူခိုး ဒါးပြတွေလဲ . လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း တပ်ထဲဝင် ခိုလှုံ.နေတာ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် ။ သူများသားသမီးအကြောင်း မသိရင်နေ. ကိုယ်.သားသမီးအကြောင်းတော့ ကိုယ်သိကြမဲ့ မိဘ တွေချည်းပါဘဲ ။
ပြည်သူ.တပ်မတော် ဖြစ်စေဘို.ရာ ပြည်သူတွေ အပေါ်မှာလဲ မူတည်လိမ့်မယ် ဖြစ်တယ်။
တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူရင်ကြားစေ.ဘို ရာ တပ်မတော်မှာရော ပြည်သူမှာပါတာဝန်ရှိတယ် ၊ အသီးသီးတို.မှာ ပြုပြင်စရာတွေ ရှိမယ်။ ဖွဲ.စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အခန်း ၇ ၊ ပုဒ်မ ၃၃၇ မှ ၃၄၄ (ခ) ကို အကောင်းအထည် ဖေါ်ရာမှာ တပ်မတော်ထဲမှာ တတ်နိုင်သမျှ ဂျိုကြိုး နားရွက်ပဲ့တွေ မပါဘို. အထူးစမ်း
ဒို.နိုင်ငံမှာ ဥပဒေ ဆိုတာတွေကို သေချာစွာလေ့လာရင်သဘောပေါက်နား
လည်ရင် လူတွေမှာ ဘယ်လို လူ.အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်၊ ဘယ်လို တာဝန
်တွေ ရှိတယ် ဆိုတာကို ဖေါ်ပြထားတာကိုတွေနိုင်တယ် ဒါကြောင့် လူတိုင်းဟာ ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာကြမယ်ဆိုရင်။ တာဝန်ရှိသူဆိုတာ
တွေဟာ ဘာတွေကို ဘာကြောင်.လုပ်နေကြတယ် ဆိုတာ သိမယ် ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကိုလဲ မိမ်ိသိပြီး အံဝင်ဂွင်ကျ ပါဝင်နိုင်မှာမို. ဒို.နိုင်ငံဟာ အေးချမ်းသာယာတဲ့ နိုငံတခုဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒိုယတတွေဟာ စိတ္တသုခ ကာယသုက္ခ နဲ့ြ့ပည်.စုံကြလိမ့်မယ်လို.ယုံကြည်တယ်။
ဒီနေရာမှာ ဥပဒေကို မလေးစား မလိုက်နာသူတွေချိုးဖေါက်သူတွေကိုဥပဒေ
အတိုင်းထိမ်းသိမ်းဘို လိုအပ်ရင် အရေးယူဘို. ရဲတပ်ဖွဲ.နဲ့တပ်မတော်တို.လဲ ရှိတယ်။ သူတို.ဟာလဲ ဥပဒေကို လိုက်နာပြီး ၊ ကျင့်ထုံးများအတိုင်း ဆောင်
မြန်မာတပ်မတော်ဟာ သမိုင်းစဉ်နဲ. ပေါ်ပေါက်လာသလို့ ပုလိပ်( ရဲတပ်ဖွဲ.) ဟာလဲ တပ်မတော်ထက်ရှည်လျှားတဲ့ သမိုင်းစဉ်နဲ့ ဖြစ်တယ် ။ တပ်မတော်
ဖျက်ဘို.ကြိုးစားတာမှာ သက္ခာချတာတွေ နာမည်ဖျက်ခံရတာ အကြောင်း အတော် အတန်ပြောခဲ့ ဘူးပြီး ဖြစ်တယ်။ အဓိကက နိုင်ငံရေး ပိုင်းမှာ ၁၉၆၂ ခုကစပြီ။ လုံးဝတာဝန်ယူခဲ့တာကြောင့်ဘဲ ။ တပ်မတော်နဲ့ပြည်သူကို ခုတုန်း
လုပ်တဲ့ တပ်မတော် ဆန်.ကျင်သူတွေ တိုက်ရိုက် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ
မှန်က လွတ်လပ်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုမှာ တပ်မတော်သာ ခေါင်းဆောင်
မှု မပေးခဲ့ရင် ဒို.နိုင်ငံသမိုင်းတပ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းဟာ တမျိုးတဖုံ ဖြစ်ခြင် ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ ဆိုလိုတာက တပ်မတော်ဆိုတာ မရှိခဲ့ရင် ဒို.ရဲ လွတ်လပ်ရေး
ဟာ ဘယ်နေ မယ် မှန်းမသိဘူး ၊ ဒို.ကြမ္မာ၊ ဒို.အချိန်နဲ့တန်လို ဖြစ်ရကိန်း
ကြုံရင် ဘယ်သူဦးဆောင် ဆောင် ဖြစ်ရမှာဘဲပေါ့. မြန်မာစကားမှာ“ ရွာက
တည်တဲ့ ဘုရား သူကြီးကောင်းမှု”ဆိုတာမျိုးပေါ့ ၊
မွေးဇာတာ နာမည် ကိုထိန်လင်းတယောက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်
သခင်အောင်ဆန်းဖြစ်လာပြီး စစ်တပ်ဖွဲတော့ ဗမာနာမည် ဗိုလ်တေဇ ၊ ဂျပန်လို အိုမါဒါ မွန်ဂျီး ၊ တရုတ်လိုတော့ တန်လူသျှို တဲ့၊တော်လှန်ရေးကာလ
နာမည်ဝှက် မျိုးအောင်(သို.) နောင်ချို ၊ ကိုနေ၀င်းနဲ့ သီးသန်.ဆက်သွယ်ရေး
အမည် ကိုဆက်ဖေ လို.မှတ်တမ်းတွေမှာ တွေရတယ် ။
တော်လှန်ရေးကာလ ဆိုတာ ကွဲပြားသိဘို.လိုတယ် ဂျပန်ကို တော်လှန်တဲ့
ကာလကို ပြောတော့၊ အင်္ဂလိပ် ကိုတော်လှန်တဲ့ကာလဆိုတာ မရှိဘူးလို.ပြောခြင်သလား ။ မသိကြလို.လား၊ အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။
ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်ရေး ရယူခဲ့တာလို.ပြောနေသူတွေ ရှိတယ်။ ဟုတ်ရဲ့လား သေချာရဲ့လား ? အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်တဲ့ ၁၂၅ နှစ် ကာလအတွင်း ၊ တပ်မတော် မဖွဲ.ခင်က အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်လို အသတ်ခံရသူတွေ ကွက်မျက်ခံရသူတွေကို တော့ မစော်ကားကြပါနဲ့ ၊ မသိတာလား၊ အသိအမှတ်မပြုခြင်တာလား ? ဘယ်သူမှ စကားထဲ ထည့်မပြောဘူး ၊ ကျောက်တိုင်မထူဘူး။
အောင်ဆန်းက လွဲရင် ဒို.နိုင်ငံမှာ တခြား ဘယ်သူမှ မရှိတော့ သယောင်
ပြောနေကြတာတွေဟာ ဒို.တခြားခေါင်းဆောင်တွေကို စော်ကားနေကြတာ
ဘဲ ၊ ဖေဖေရဲ့သမီးက အဆိုးဆုံး ၊ ကျမဖေဖေ မမွေးခင်က အင်္ဂလိပ်သတ်လို. သေခဲ့ရတဲ့ ကျတော့် ဖေဖေ ၊ ကျမဖေဖေတွေ အများကြီးဘဲ ရှိတယ် ဆိုတာ
ကို သိထားစမ်းပါ လုံမရဲ့ ၊ သိထားစမ်းပါ ။
ဒို.တတွေဟာ ဒိူ.ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘယ်လိုနားလည် ကြသလဲ? ကြေကြေညက်ညက် နားလည်ရဲ့လား? ဘယ်သူတွေဟာ လေသမားလဲ. ဘယ်သူတွေဟာ အလုပ်သမားလဲ ကွဲကွဲပြားပြား သိကြသလား။ ဒို.နိုင်ငံမှာ အရာရာဟာ အတုအယောင်တွေ Fake တွေ ဆိုရင်တော့ မကောင်းတော့ဘူး ၊ ဆန်းစစ်ရလိမ့်။
ကဲ ဆက်ပြောရအုံး မယ်၊ တပ်မတော်ဟာ သူအလုပ်သူ မလုပ် လျှော့ရဲရင်လဲ
လူကြိုက်နဲမယ် ၊ သူအလုပ် သူလုပ်လာရင်တော့ မကြိုက်သူများမယ်။ အရင်က ဆိုရင် ပုလိပ်တွေကို လူမုန်းတယ် ၊ လူတွေနဲ့ နေ.စဉ်ထိစပ်နေရ
တာဟာ ပုလိပ်တွေ၊ အခု ဆိုရင် တပ်မတော်ရဲ့ တစိပ်တပိုင်းဖြစ်တဲ့ ပုလိပ်
တွေကိုလဲ လူမုန်းတယ် ၊ တပ်မတော်ကိုလည်းမုန်းတယ် ။ ပုလိပ်ဟာ ပုလိပ်
တာဝန်လုပ်ပြန်တော့လဲ ပုလိပ် နာမယ် ပျက် တာဘဲ။
အခုဆိုရင် အရင်ကအတိုငးဘဲ ပုလိပ်ဟာ တပ်မတော်ရဲ အကိုင်း တကိုင်း မို. အစိုးရနဲ့ ပြည်သူကြားဖြစ်စေဈ တပိမတော်နဲ့ ပြည်သူကြားဖြစ်စေ ၊ ကြားခံ အဖွဲ . ကြားညပ်နေတဲ့ အဖွဲ . ၂ ဖက်စလုံးက ထိုးတာကို ခံနေရတဲ့ အဖွဲဘဲ
တပ်မတော်ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မုန်းခဲ့တာတွေ ပြောပြီးပြီ ၊ အထူးသဖြင် ၁၉၆၂ ခုက အခုထိ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ၁၉၈၈ ခုမှာ. “မှန်ခဲ့ လို. ၊ မှန်အောင် တည့်တည့် ပစ်ခဲ့လို.ဘဲ”ပေါ့ ၊ ပစ်တာသာပြောတာ ဘာကြောင့် ပစ်ရတယ်
ဆိုတာကို ထည်.မပြောကြဘူး ။ ထိုင်ရှိမခိုးလို လက်အုပ်မချီလို ဘဲပေါ.၊ ထားပါတော့လေ။
အကယ်တော့ သမိုင်းစဉ်လာအရ ပုလိပ် ဟာ အမုန်းခံဘ၀ ၊ ပုလိပ်ဆိုတာ ဒို.နိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကမှ ပေါ်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်အဖွဲ.၊ အစိုးရရဲ လက်ကိုင်ဒုတ်အဖွဲ. ဖိနှိပ်ရေးအဖွဲလို.အင်္ဂလိပ် ဆန်ကျင်ကြတဲ့ဒို.အမျိုးသား
နိုင်ငံရေးသမားတွေက ဆိုတယ် ၊ ပုလိပ်ကို ပုလိပ်ရောဂါနဲ့ နှိုင်းပြီး မကောင်း ဆိုဝါး သတ္တ၀ါ လို မြင်ခဲ့ကြတယ် ။ တပ်မတော်ကိုမြန်မာတွေတကယ် မုန်း
ကြသလား? ဗမာတွေက မလိုလားကြဘူးလား ? မလိုလားသူ လိုလားသူ - ကြိုက်သူမကြိုက်သူတော့ ရှိမယ်၊ မုန်းတယ် လို.တော့ ဟုတ်မယ် မထင်ဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ မသိနိုင်ဘူး ခါးပိုက်နှိုက် ။ လူလိမ် လူကောက် ၊ တေလေဂျပိုး ၊ သူခိုး ၊ ဒါးပြ၊ သူပုန် သူကန်တွေကတော့ မုန်းခြင်မုန်းလိမ်မယ် ။
ထပ်ပြောရမယ် ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ဥပဒေလေးစားသူ. မလေးစားသူရှိ
စမြဲ၊ ဥပဒေ ထိမ်းသူနဲ့ ဥပဒေချိုးဖေါက်သူဟာ ပဋိပက္ခ မဖြစ်ရင်တောင် သဟဇာတ မဖြစ်ဘူး ။ တဦးးကို တဦးလေးစားရမယ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
ရမယ်၊ ညီညွတ်ကြရမယ် ဆိုတာတွေကို အဓိပါယ်ကောက် လွဲမှားလို.လဲ မဖြစ်သေးဘူး။
ဒို.နိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ် ဖွဲတဲ့ ပုလိပ် အဖွဲထဲမှာ ကုလားတွေ တရုတ်တွေ ဒို.တိုင်းရင်းသား လူမျိူးစုဝင်တွေ များပြီး၊ ဗမာတွေနဲတယ် ၊ အကြောင်းကတော့
အမျိုးမျိုးပေါ.၊ အဓိကအကြောင်းက. ဗမာကို အင်္ဂလိပ်က မယုံဘူး ဗမာတွေ
ဟာ အင်္ဂလိပ် သတ်မှတ်တဲ့ ပညာအရည်အချင်းမမှီိဘူး။ ပညာအရည်အချင်း
ဆိုတာကတော့ အင်္ဂလိပ် စာနဲ့ စကား ၊ ဒါမှမဟုတ် ဟိန္ဒူ စာနဲ့စကားမတတ်
လို.ဘဲ။ စစ်တပ်ထဲလဲ ၀င်လို.မရဘူးလို. လူကြီးတွေပြောတယ်. ဗမာကို လက်နက်ကိုင်ခွင့်ပေးရင် သူခိုး ဒါးရိုးလှမ်းတာမျိုး ဖြစ်မှာဆိုတာ အင်္ဂလိပ်
နောက်ပိုင်း ပုလိပ်အဖွဲ.နဲ့ စစ်တပ်ထဲ ၀င်လို ရတဲ့ ဗမာတချိူ ၀င်ကြပြီး။ များသောအားဖြင့်အစိုးရရဲ့လက်ကိုင်တုတ် ၊လက်ပါးစေဖြစ်ခဲ့ကြ တယ် ၊ ဘယ်အစိုးရလက်ထက်မှာမဆို ဒီအတိုင်းဘဲ ။ အင်္ဂလိပ် သြဇာခံရင် အလို
တော်ယိ ဖြစ်ရင် Sir ဘွဲနဲ့ သူကောင်းပြုခံကြရတယ် ။ Indian Civil Service ဆိုတဲ့ စကားကိုသာ ကြည့်ကြပေတော့။
ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ် လက်ထက်ထဲဘဲ ဒို.နိုင်ငံမှာ စစ်မှု မထမ်းမနေရဆိုတဲ့ ဥပဒေ ပြဌာန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကို တွေရလိမ့်မယ် ။ လွတ်လပ်ရေး တို်က်ပွဲအတွက် ဖွဲ့စည်းတဲ့ မြန်မာတပ်မတော်ဟာ စေတနာ.၀န်ထမ်း တိုင်း ချစ် ပြည်ချစ် မျိုးချစ်တွေဖြစ်တယ် ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ ကပြားပေါင်းစုံ ပါတယ် ဆိုရင် လဲ မမှားပါဘူး။ လွတ်လတ်ရေးရပြီးနောက်လဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှု မထမ်းမနေရ ဥပဒေ မရှိဘူး. အခု တပ်ထဲမှာ ရှိနေသူတွေ ဟာ သူတို. ဖါသာ ဘော်လံတီယာ ၊ သူတို.ဘ၀ သူတိုအကြောင်းနဲ့ ၀င်လာကြတာ။
နိုင်ငံတော်နဲ နိုင်ငံသားတိုကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဘို.ဆိုတာကတပ်မတော်
ရဲ့ဆောင်ပုဒ် တပ်ထဲဝင်လာသူတွေရဲ့ ဆောင်ပုဒ် ဟုတ်ခြင်မှ ဟုတ်မယ် ။ အမှန်စဉ်စစ်က စစ်မှုထမ်း ၀ါသနာအလျှောက် ၀င်လာကြသူတွေ ရှိသလို
အလုပ်မရှိလို. အလုပ်တခုအနေနဲ စစ်မှူထမ်းရအောင်ဝင်လာတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း
က များမယ်ထင်တယ် ။ စားဝတ်နေရေး မပူရ လစာလဲမှန်မှန် ရတယ် ဆိုတော့ အိုကေဘဲ။
“ ကူညီခြင်း” ဆိုတာကတော့ ပုလိပ်တွေရဲ့ ဆောင်ပုဒ် ။ ကူညီခြင်သူမှန်သမျှ ပုလိပ်ထဲ -၀င်လာကြတယ်. အကူအညီတွေ ပေးနေတာဘဲ.ဘယ်လိုအကူ
အညီမျိုးတွေလဲ တော့ မသိဘူး. သူတိုအဓိပါယ်နဲ့ သူတိုဘဲ ။ဒို.စကားမှာ ယောက်ျားဖျင်းပုလိပ် ၊ မိန်းမဖျင်း ကွိတ် လို.တောင်ပြောကြတာဘဲ။
လွတ်လတ်ရေးရပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် ပုလိပ်အဖွဲ.ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
တွေ လူပ်ခဲ့တာ တွေရှိပေမဲ့သူတိုရဲ စာရိတ္တ တွေကိုတော ပြုပြင်နိုင်တာမတွေ.ရဘူး။ ပုလိပ်တွေဟာ သမိုင်းနဲ.ချည် တင်နေတဲ့ အကြွေးတွေကို အခုထိ မဆပ်နိုင်သေးဘူး. ဆပ်နိုင်မယ်လဲ မထင်ဘူး ကြွေဟောင်းမကြေကြွေးသစ်ဘဲ
ထပ်တင်နေတယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အကူအညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမပါရင် ဘယ်လိုမှ အဖတ်ဆယ်လို.မရ တော့တဲ့ အခြေရောက်သွားမှာဘဲ ၊ ပြည်သူ
လူထုကလဲ ကြီးသောအမှုငယ်အောင် ငယ်သောအမှု ပလပ်ရအောင် မလုပ်
ခြင်နဲ့ ဥပဒေ အတိုင်းသာရှိပေစေ၊ လဘ်ပေး စရာလဲ မလိုဘူး။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသာဆိုသူတွေဟာ တက္ကသိုလ်မှာ ပညာလေ.လာရင်း Boys Army ဆိုတဲ့ အပျော်ထမ်း တက္ကသိုလ်တပ်ရင်းမှာ ၀င်လို.ရတယ် ။ တပ်မတော် ၀န်ထမ်းတွေဟာ ၂ ယောက်ပေါင်း လို.မှ ၄ တန်း တောင် မအောင်ဘူးလို. ပြောသူတွေဟာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်သားကြီးတွေရဲ့
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ တပ်မတော်က အာဏာမသိမ်းခဲရင် မြန်မာနိုင်ငံဘာဖြစ့် မှာမို.လဲ ၊ ဒါတော့ မသိဘူးလေ၊ မထိမ်းခဲ့ ရင် ဖြစ်ခြင်တာဖြစ်မယ်။ ဖြစ်လာမဲ့ အတိုင်းဘဲ ပေါ့ ၊ ဖြစ်မှ မဖြစ်ခဲ့တာ။ တပ်က လက်ဦးသွားလို.ဆိုပြီးပြော
လို.ရတယ် ၊ ၁၉၈၈ ခုက အဖြစ်နဲ့ နိုင်းကြည့်ရင် ဖြစ်စက တပ်ကစောင့်ကြည်
နေခဲ့တာဘဲ၊ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ မြင်ခဲ့ရ တွေ.ခဲ့ရ သိခဲ့ရတယ် ။ နောက်ဆုံးမတော့ တပ်ကဘဲ ထိမ်းခဲ့ရတာဘဲ။။
နို်င်ငံတိုင်းမှာ တပ်မတော်တွေရှိတယ် ။ အချို.နိုင်ငံတွေမှာ တပ်မတော်တွေ
ဟာ အခန်းအနားအဆောင်အယောင် အလှအပ အဆင်အယင်တွေ ထက် ဘာမှပိုတဲ့ တပ်မတော်တွေမဟုတ်ဘူး ၊ သူတိုကိုမေးရင်လဲနိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံ
တော် သားတို.ကို ကာကွယ်ဘို.ဆိုတာကိုဘဲ ပြောမှာဘဲ ။ တချို.နိုင်ငံတွေဟာ
ဆိုရင် စတိ အဖြစ်သာ တပ်မတော် တွေ ဖွဲ.ထားကြတယ် ။ သူများ သြဇာခံ လက်သုံးခံ တပ်မတော်တွေဘဲ ဆိုတာကိူ လေ.လာသူတွေ တွေကြလိမ့်မယ်။
အချို.နိုင်ငံတွေဟာ သူတိုရဲ တပ်မတော်ကို သူများထက်အင်အားကြီးနိုင်သမျှ ကြီးအောင် တောင့်တင်းအောင် နူးကလီးယား အပါအ၀င် ခေတ်မီ လက်နက်
အမျိုးမျိုးတပ်ဆင်ထားကြတယ် ၊ သူများနိုင် ငံတွေကိုတော့ လောက်လွှဲ ကိုင်
တာကိုတောင် ပိတ်ပင်တားမြစ်တယ် ။
မြန်မာတပ်မတော် ဟာ စတင် ဖွဲစည်းကတည်းက နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတို.လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဖြစ်တယ် လွတ်လပ်ရေးကို ကာကွယ်ဘို.ဖြစ်တယ် ။
မြန်မာတပ်မတော် ကို ခေတ်မီ တပ်မတော် အဖြစ် ဖွဲစည်းရေးဟာ ၁၂၅ နှစ် နောက်ကျခဲ့ရပြီး ၊ မျိုးချစ်တပ်မတော် တခုဖြစ်ရေး စကထဲက သူပုန်တပ်မ
တော် အဖြစ် သိက္ခာချခံခဲ့ ရတယ် တပ်မတော် ဖွဲ.စည်းသူတွေဟာ ပြေးနိုင်
လို.သာ လွတ်ခဲ့ ကြတာဖြစ်တယ်။ သူတို.မတိုင်ခင် ဖွဲခဲ့တဲ့ ဂဠုံတပ်တို. နဂါး
တပ်တွေကတော ကြက် ကလေး ဌက်ကလေးများလို လယ်ပင်း လိမ်ချိုးခံရပြီး
ကြက်ကလေး ဌက်ကလေးများလို ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရတယ်။